Maxaad Ka Taqaanaa 9-ka Meelood Oo Laga Guuray Dunidana Ugu Quruxda Badan - Daryeel Magazine
Maxaad Ka Taqaanaa 9-ka Meelood Oo Laga Guuray Dunidana Ugu Quruxda Badan
Sida lagu qoray wargeeska Arabian Business waxa jira 9 meelood oo ah meelo laga guuray,kuwaas oo noqday meelaha ugu quruxda badan caalamka,kuwaas oo ah kuwo u badan meelo hore loogu noolaan jiray.
Meelahan ayaa ah meelo dalxiiska ku wanaagsan,waana meelo loo dalxiis tegi karo laakin cabsi badan leh, waxaana kamid ah meelaha lagu qoray wargeyska Arabian Business meelahan hoos ku qoran.
1: Metro abandoned warehouse:
waa meel ku taala dalkaasi Maraykanka,gaar ahaana meesha lagu magcaabo Cincinnati oo ah magaalo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn maamul goboleedka Ohio ,waana magaalo ganacsi ,sidoo kalena leh wershado badan ,waana mid dhacda galbeedka dalkaasi Maraykanka ,iyada oo noqotay meel beri hore laga guuray,sidoo kalena aad u cabsi badan,mana dhacdo in cidi tagto cabsi darteed.
2: Sunken yacht
waxay noqotay meesha labaad ee ugu quruxda badan meelaha laga guuray ee adduunka ugu quruxda badan,waxaanay ku taalaa meeshani Antarctica.
Waa caasimadii hore ee wadanka Ukrain, taas oo caasimad u ahayd waqtiyo hore,waxaana lagu magacaabaa iminka magaaladii dadka dhintay, iyada oo ay samayn badan ku yeelatay loogana guuray hub nuclear ah oo ku dhacay magaaladaasi.
4: Hafodunos Hall
waa meel ku taala Wales waqooyigeeda,waana meel la dhisay sannadihii 1861 ilaa 1866 intii u dhaxaysay,waa meel aad u weyn waana meel taariikh weyn leh,marka loo eegaayo gobolkaasi Wales.
5: Wendell Theater
Waa meel sida hoolalka shirarka loo dhisay,waana meel ku taala Chicago ee dalkaasi Maraykanka,waxaanay balac ahaan gaadhaysaa ilaa 4000 mitir,iyada oo ku dhinac taala wadada Roosevelt.
6: Abandoned City:
waa magaalo ku taala dalkaasi Taiwan,gaar ahaana gobolka lagu magcaabo Keelung, waana meel aad u qurux badan oo u eg sekedo guryo ah, waxaana ka baxay dhir kala duwan.
7: Homes domes:
waa meel ku taala gobolka Florda ee Cape Romano, waana dhisme la dhisay sannadkii 1981-kii, iyada oo laga guuray,waana meel aan iminka cidi deganayn oo cid la ah.
8: Abandoned mill:
waa dhisme aad u qurux badan,waana mid la dhisay sannadkii 1866, waxaana laga dhisay Calley Mills,oo kamid ah Sorrento oo ku taala dalkaasi Talyaaniga, waana meel uu wabi maro, waxaanay shaqaynaysay bilawgii qarnigii 20-naad.
9: Wonderland Amusement Park:
waa meel ku taala dalkaasi Chine, waxaanay masaafo dhan 32 kilometers magaalada Beijing, waxaana la dhisay sannadkii 1998 kii,waxaana la joojiyey waxoogaa ka dib ,iyada oo loo joojiyey caqabado maaliyadeed, waxaana dib u dhiskiisa la bilaabay sannadkii 2008, iyada oo haddana la joojiyey.
Maxaad ka Taqaanaa Madhalaysnimada (Infertility) Maxaad ka taqaanaa maadada Magnesium?? Hurdo Yaraantu Waa Cadawga Ugu Wayn Ee Quruxda